यलु जोशी जेष्ठ ८, २०७८ शनिबार
तपाईंहरू ध्यान गर्नुहुन्छ ? गर्नु हुन्छ भने कसरी ? सबैजसोको एउटै भनाइ हुन्छ, पलँेटी कसेर आँखा बन्द गरेर । तर हिँडेर पनि ध्यान गर्न मिल्छ भनेर कमैलाई थाहा होला । यसरी गरिने ध्यानलाई चक्रमण ध्यान भनिन्छ । पलेँटी कसेर ध्यान गर्न नसक्नेहरूलाई हिँडेरै गरिने चक्रमण ध्यान उपयोगी हुने योग गुरुहरूको भनाइ छ ।
यलु जोशी बैशाख ३०, २०७८ बिहीबार
सामाजिक सञ्जाल हेरेर वा कसैको भनाइका आधारमा कोरोना सङ्क्रमितले औषधि त सेवन गरिरहनुभएको छैन ? आफूखुसी कुनै पनि औषधि सेवन गर्न नहुने चिकित्सकको सुझाव छ । कोरोना महामारीको दोस्रो लहरले जनजीवन अस्तव्यस्त बनाएको र त्रास बढिरहेको अवस्थामा चिकित्सकको सिफारिसबिनाका औषधि सेवन गर्नेको सङ्ख्या धेरै रहेको चिकित्सकहरूको दाबी छ ।
यलु जोशी बैशाख २७, २०७८ सोमबार
कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको दोस्रो लहरले धेरैलाई तनाव दिएको छ । एकातिर औषधि र अस्पतालमा श-या अभाव छ भने अर्काेतिर दैनिक हजारौँको सङ्ख्यामा सङ्क्रमित बढिरहेका समाचारले चिन्ता थपिदिएको छ । समाजमा देखिएको यो समस्यालाई कम गर्ने उद्देश्यले केही मनोचिकित्सकले ‘ह्याप्पी माइन्डस् डट हेल्थ’ अनलाइनबाट परामर्श दिन सुरु गरेका छन् । ‘ह्याप्पी माइन्डस् डट हेल्थ’का प्रबन्ध निर्देशक श्रेया गिरीले भन्नुभयो, “कोरोना प्रकोपपछि...
यलु जोशी बैशाख २३, २०७८ बिहीबार
कोरोना भाइरस सङ्क्रमितहरू सामान्य अवस्थामा घरमै एकान्तबास (होम आइसोलेसन) बस्न उचित हुने र स्वास्थ्य अवस्था जटिल भएमात्र अस्पताल जानु उचित हुने सुझाव कतिपय चिकित्सकको छ । सङ्क्रमित होम आइसोलेसनमा सचेत भएर बस्दा तनावबाट केही हदसम्म भए पनि सहज हुने चिकित्सकहरूको सुझाव छ ।
यलु जोशी बैशाख २१, २०७८ मंगलवार
कोरोना (कोभिड–१९) सङ्क्रमणको दोस्रो लहरका कारण धेरैमा श्वासप्रश्वाससँग सम्बन्धित समस्या बढी देखिएको छ । घरमै विभिन्न व्यायामको माध्यमबाट समेत शरीरमा अक्सिजन मात्रा बढाउन सकिने विज्ञहरूले जनाएका छन् । श्वासप्रश्वास तथा छाती रोग विशेषज्ञ डा. रक्षा पाण्डे सामान्य व्यायामले श्वासप्रश्वासलाई बढाउन सकिने बताउनुहुन्छ । “कोरोना प्रकोपले हजारौँ सङ्क्रमित होम आइसोलेसनमा छन् । सामान्य व्यायामले धेरैलाई श्वासप्रश्वासमा...
यलु जोशी बैशाख १९, २०७८ आईतवार
कोरोना (कोभिड–१९) सङ्क्रमणको दोस्रो लहरले आतङ्कित भएको बेला रोग लाग्नै नदिने उपायतिर धेरैको ध्यान गएको छ । शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन खानपान, जडीबुटी र आयुर्वेदिक औषधिको प्रयोगमा जोड दिन आयुर्वेद चिकित्सकहरूको सुझाव छ । यसका लागि जडीबुटीबाट बनेका आयुर्वेदिक औषधि सेवन गर्न राजधानीको नरदेवीस्थित केन्द्रीय आयुर्वेद चिकित्सालय निर्देशक डा. प्रदीप केसी जोड दिनुहुन्छ । उहाँका अनुसार स्वस्थ खानपान र आयुर्वेदिक...
यलु जोशी बैशाख १४, २०७८ मंगलवार
कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउँदैमा सङ्क्रमणको जोखिम अन्त्य नहुने स्वास्थ्य विज्ञहरूले बताएका छन् । हाल प्रयोगमा आएका कोरोनाविरुद्धका खोप लगाएका एक सयमध्ये ७०–८० जनालाई मात्रै सुरक्षा प्रदान गर्छ, बाँकीलाई खोप लगाए पनि फाइदा नहुने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । त्यसैले अनिवार्य रूपमा खोपका दुवै मात्रा लगाएको हुनुपर्ने, खोप लगाएको छ महिना मात्रै काम गर्ने र खोप तथा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना दुवै एकसाथ भए मात्र कोरोना...
यलु जोशी बैशाख ११, २०७८ शनिबार
सहरी क्षेत्रमा कोरोनाको संक्रमण बढेको भन्दै बैशाख मसान्तसम्म हलहरू बन्द गरे पनि चलचित्र छायाङ्कन भने धमाधम भइरहेको छ । सरकारले सिनेमा हल बन्द गर्ने निर्णय गरेपनि चलचित्रको छायांकनमा प्रतिबन्ध लगाएको छैन । जसले गर्दा निर्माताहरू फिल्मको छायाङ्कन रोकेका छैन् । बाबरी र प्रेमगन्ज’ ले छायाङ्कन सुरु गर्नुको साथै गत दुई हप्तादेखि चलचित्र ‘बिहे पास’ को पनि छायाङ्कन भइरहेको छ ।
नेवार समुदायमा सामान बोक्न प्रयोग गरिने ‘खर्पन’ लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ । जन्मदेखि मरणसम्मका काम र तरकारी व्यापारदेखि बिरामी बोक्नसम्म खर्पन प्रयोग गरिन्थ्यो । बढ्दो सहरीकरण, ढुवानीका अन्य साधनको उपलब्धता र बजार संस्कृतिमा आएको परिवर्तनले खर्पनको प्रयोग निकै कम भइरहेको छ । युवापुस्तामा मोह घटे पनि बूढापाका भने अझै खर्पनमा तरकारी बेच्दै हिँड्छन् । भक्तपुर लोकन्थलीका हरिभक्त द्वारेले भन्नुभयो, ‘सामान बोक्नुपरे...
यलु जोशी चैत्र २९, २०७७ आईतवार
गर्मी मौसमको आगमनसँगै कतिपय रोगव्याधी सल्बलाउन थाल्छन् । गर्मीयामसँगै बालबालिका अझ बढी जोखिममा हुन्छन् । कोरोना भाइरसको जोखिमसँगै अन्य रोगले पनि बालबालिकालाई सताउने हुँदा सतर्क हुनु जरुरी रहेको चिकित्सकको सुझाव छ । गर्मी बढेसँगै झाडापखाला, आउँ, टाइफाइड, मलेरिया, कालाजार, डेङ्गु, हेपाटाइटिस, छालामा हुने समस्यालगायतका बिरामी बढ्ने गरेको विशेषज्ञको भनाइ छ । बालबालिकालाई यस्तो रोगबाट जोगाउन अझ बढी सतर्क रहनुपर्छ ।...